Duufaan xoog leh ayaa burburisa tuulooyin, boqolaal qofna ku dhaawacday Czech Republic |
Jebinta Wararka Safarka • Czech Republic wararka safarka • Wararka safarka Yurub • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Warka Dalxiiska ee Masuulka ah • Ammaanka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Duufaan xoog leh ayaa burburisa tuulooyinka, waxayna ku dhaawacdaa boqolaal Czech Republic ah
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Czech Republic wararka safarka » Duufaan xoog leh ayaa burburisa tuulooyinka, waxayna ku dhaawacdaa boqolaal Czech Republic ah
In ka badan 150 qof ayaa lagu soo warramey inay ku dhaawacmeen, halka “boqollaal” boolis iyo jawaabayaashii ugu horreeyey loo diray koonfurta Moravia.
Duufaanta waxay noqon kartaa F3 ama F4 miisaanka Fujita.
Duufaanta waxay u badan tahay inay tahay duufaantii ugu xoogga badneyd taariikhda dhow ee Czech waana mid aan Yurub ku soo arag.
Wararkii dhaawaca iyo waxyeelada ayaa wali soo socda.
Qeyb F3 ama F4 duufaan ah ayaa hoos loo taabtay Czech RepublicBaadiyaha ku teedsan xadka Czech-Slovak, waxyeello ba'an u geystey dhowr tuulo Moravia oo ku taal koonfur-bari Czechia. In ka badan 150 qof ayaa lagu soo warramey inay ku dhaawacmeen, halka “boqollaal” boolis iyo jawaabayaashii ugu horreeyey loo diray koonfurta Moravia.
Fiidiyow ku wareegaya baraha bulshada ayaa qabtay dheecaanka taabanaya meel u dhexeysa Breclav iyo Hodonin, oo ku taal koonfur-bari Czechia.
Duqa magaalada Hrušky, oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 1,500, wuxuu leeyahay kala badh tuulada waa la “burburiyey”
Masuuliyiintu waxay ku qiyaaseen tirada dhaawacyada inta udhaxeysa 100 ilaa 150 qof, laakiin wararka dhaawaca iyo waxyeelada ayaa wali soo gaaraya.
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah TV-ga Czech TV, duufaanta ayaa laga yaabaa inay ahayd F3 ama F4 oo ku saabsan miisaanka Fujita, oo lagu qiimeeyay "muhiim" illaa "daran" waxyeelo. Michal Žák oo ku xeel dheer saadaasha hawada ayaa yiri "waxay u egtahay inay tahay duufaantii ugu xooganeyd taariikhda [Czech] ee dhowaan dhacday" waana mid aan Yurub ku soo arag.
Adeegyada deg-degga ah ee maxalliga ah ayaa uga digay muwaadiniinta inay banaanka ka baxaan ama waddooyinka, waxayna ku tilmaameen xaaladda "guryaha burburay, dabka, shilalka taraafikada, geedaha saaran gawaarida iyo guryaha."
Booliska Czech ayaa ku boorriyay dadka waddooyinka jooga inay "waddada u banneeyaan" iyaga.
Markii ugu dambeysay ee duufaan lagu arko Czechia waxay ahayd May 2018. Taasi waxay ahayd dhacdo F0 ah oo ku dhufatay inta badan dhul beereed faaruq ah oo ku yaal degmada Plzen, taasoo aan keenin wax dhaawac ah.